Qalabka Mashiinka Mashiinka Adkeynta Indoction-HLQ ​​Adkeynta
Bogga ugu weyn / Codsiyada / Dhibaatada Induction / Qalabka Mashiinka Mashiinka Adkeynta Oogada
Qalabka Mashiinka Mashiinka Adkeynta Induction
Categories: Dhibaatada Induction, Machine Hardening Induction Tags: Mashiinka qallajinta CNC, daaweynta kululaynta oo adkaata, qalabka mashiinka adag, geedi socodka adkaanta, adkaynta induction, Qalabaynta adkaanta induction, geeddi-socodka adkeynta, garaacista qoobabka adag, dusha sare ee adkaanta dusha sare, qalabka qallajinta indha-indheynta, kululaynta induction ee adkaanta, dusha sare ee carbinta, Soo-saarista adag ee PLC, adkaanta dusha
Qalabka Mashiinka Mashiinka Adkeynta Neefsashada CNC
Adkeynta adkaynta waxaa loo adeegsadaa gaar ahaan adkeynta dusha sare ee sagxadaha iyo fallaadhihii iyo sidoo kale qaybo qaabab isku qasan oo aag gaar ah u baahan oo keliya in lagu kululeeyo.
Iyada oo loo marayo xulashada inta jeer ee hawlgalka nidaamka kuleylka induction, qoto dheer ee ka dhalata wax lays
Intaa waxaa sii dheer, waa la go'aansan karaa haddii aagga loo qallajin doono hawada, biyo ama leh emulsion gaar ah oo qallafsan. Waxay kuxirantahay habka qaboojinta, darajooyin kaladuwan oo adag ayaa la gaaraa.
Adkaynta indha-indheynta waxaa lagu ogaan karaa inay tahay buug ama xal otomaatig ah. Waxa kale oo jira suurtagalnimada in la sii adkeeyo geeddi-socod joogto ah.
Ku habboon qallafsanaanta iyo xanaaqa shaqooyinka kala duwan, sida qallajinta indha-sarcaadka fallaadhaha, geerka, biraha hagaha, saxannada, biinanka, iyo qaybaha kale;
Waxay leedahay shaqooyinka qallafsanaanta joogtada ah, isku-qallafsanaanta isku midka ah, qallafsanaan joogto ah oo isdaba-joog ah, iyo isukeenid isku mar ah;
Adeegso nidaamka xakamaynta tirada ama PLC iyo nidaamka xakamaynta xawaaraha soo noqnoqoshada si aad u ogaato meelaynta shaqada iyo iskaanka, oo aad ku xidho PLC iyo korontada kululaynta soosaarka si loo xaqiijiyo wax soosaarka otomaatiga ah.
Toos ah (adkaynta qaybaha usheeda dhexe) + jiif (qallajinta qaybaha giraanta qalabka)
Adkeynta ayaa ka mid ah HLQ kululaynta kuleylka meelaha ugu badan ee laga isticmaalo nidaamyada korantada. Boqolaal ka mid ah xalalka adag ee adag ayaa ka shaqeeya adduunka oo dhan-badankoodna waxay ku dhex jiraan warshadaha baabuurta.
Faa'iidada ugu weyn ee kuleylka kuleylinta ee qallafsanaanta ayaa ah inay qaadato dhowr ilbiriqsi. Foornada dhexdeeda, isla hawshu waxay qaadan kartaa saacado ama xitaa maalmo. Sidee taasi macquul ku tahay?
Jawaabtu waa in soo-kicintu ay tahay mid la yaab leh abuurista kuleylka si dhakhso leh. Tani, markeeda, waxay ka dhigan tahay inaad la midoobi karto adkaanta habka wax soo saarka. Ku adkaynta foornada, dhanka kale, waa waqti badan (kuleyl badan) iyo waxay ubaahantahay inaad udhaqaajiso qaybaha foornadaada ama qandaraasle.
Isdhexgalka khadka tooska ah ee qallafsanaanta ayaa si aad ah u yareyneysa waqtiyada hoggaamintaada.
Waxaad si buuxda gacanta ugu haysaa tayada, waqtiyada dirista iyo kharashyada. Looma baahna in kilo kiilo ah dib loo raro horayna loo sii wado, taas oo badbaadineysa tamarta iyo deegaanka. Ugu dambeyntiina ugu yaraan, waxaad yareysaa xaddiga maamulka ugu yaraan.
HLQ Nidaamyada Awoodda Kuleylinta Kuleylinta waxay leedahay waayo-aragnimo sannado badan oo ku saabsan qallafsanaanta is-beddelka iyo xanaaqa shaqooyinka kala duwan. Wadnaha nidaam kasta oo adkaynta waa HLQ Induction Kuleylka Nidaamka Kuleylka Kuleylka Kuleylka Aaladda Awooda, oo ah midka ugu horumarsan soosaarka soosaarka soosaarka warshadaha. Beddelayaashan la ammaanay waxay gacan ka geystaan ​​sidii loo hubin lahaa natiijooyinka qallafsanaanta-maalinba maalinta ka dambeysa, sanadba sanadka ka dambeeya
Nidaamka adkaanta waxaa ka mid ah Sawirka toosan, Horizontal (xarun la’aan) Sawiridda iyo mashiinnada la habeeyay — iyo istiraatiijiyad iyo / ama isbarbar dhigaya ilaha korantada soosaarka oo leh tiro wax soo saar iyo jadwal fara badan
Qalabkan mashiinka adag ee isdabajooga wuxuu adeegsadaa tikniyoolajiyadda kumbuyuutareedka tirakoobka, wuxuu leeyahay shaqooyin isdaba joog ah, isdaba joog ah, qayb ahaan-isdaba joog ah iyo qayb-isku-mid ah, waxaa badanaa loo isticmaalaa daminta indha-sarcaadka fallaadhaha, saxannada, biinanka iyo geerka, waxaana lagu muujiyey saxnaanta daminta sare. Qalabka mashiinka adag ee loo isticmaalo isku xirka dhexdhexaad dhexdhexaad ah, soo noqnoqoshada superaudio, soo noqnoqoshada sareyso iyo mashiinka kululeynta soo noqnoqda ee ultrahigh.
Qalabka mashiinka adag ee mashiinka CNC:
Nidaamka CNC: Mashiinka mashiinka deminta mashiinka soo noqnoqda badan wuxuu ururin karaa oo kaydin karaa barnaamijyo badan oo habka deminta iyadoo la raacayo shuruudaha shaqooyinka kala duwan.
HMI: Nooca barnaamijyada iyo mashiinka bini'aadamka ee lagu soo bandhigo Ingiriisiga iyo Shiinaha.
Xakamee xakamee: waxay xakamayn kartaa awoodda kuleylka si ay u bilaabaan, u joojiyaan, qaybaha kuleylka iyo qaboojinta, xawaaraha wareegga iyo xawaaraha dhaqdhaqaaqa.
Lathe: ku dheji qaab dhismeedka laydhka leh ee leh shaqooyin wanaagsan oo miridh ah.
Qaybaha hagaajinta ee ugu sarreeya: korsado sixitaanka korantada, si loo xaqiijiyo isku-xirnaanta qaybta shaqada dhererkeeda
Nidaamka miiska shaqada: korsado kubbadda iyo mootada adeegga si loo wado, nalka wadista, hagitaanka sare ee saxda ah iyo meeleynta saxda ah.
Nidaamka wareegga usheeda dhexe ee ugu weyn: korsado isbeddelada isdabajooga isbeddelka si loo ogaado qaybaha xawaaraha wareegga si joogto ah loo hagaajiyo.
Qaybta xakamaynta korantada: qalabka mashiinku wuxuu leeyahay awood difaac-furid, wuxuu leeyahay badbaado sare iyo kalsooni.
Jaangooyada: oo lagu sameeyo taarikada birta adag, leh daaqad iyo albaabo qulqulaya, ka hortag biyo ku buufin, fududahay in la rakibo qaybo lana kormeero habka qallajinta.
Qalabka mashiinka adag ee qallajinta / deminta
Marka loo eego shaqooyinka kala duwan, waxaa jira nooc toosan, nooca jiifka ah,nooca xidhan, nooca loo habeeyay, iwm.
1.Stardard SK-500/1000/1200/1500 nooca shaqada dhaqaajinta shaqooyinka loogu talagalay fallaadha, saxanno, biinanka iyo qalajinta qalabka
2.SK-2000/2500/3000/4000 Nooca wareegaya ee Transformer, Waxaa loo adeegsaday kuleylka dhererkiisa in ka badan 1500mm usheeda dhexe
Nooca 3.C xiran: kartoo usheeda dhexe weyn, jawi shaqo More nadiif ah.
Qalabka mashiinka adag ee adag
SK-500/1000/1200 / 1500/2000 / 2500/3000/4000 Oo loo adeegsaday usheeda dhexe
Dhererka kululaynta ugu badan （mm） 500 1000 1200 1500
Dhex-dhexaad kululaynta （mm） 500 500 600 600
Dhererka haynta ugu badan （mm） 600 1100 1300 1600
Miisaanka ugu badan ee shaqada 'Kg' 100 100 100 100
Xawaaraha wareegga shaqada Workpiece （r / min） 0-300 0-300 0-300 0-300
Xawaaraha shaqada oo dhaqaaqaya （mm / min） 6-3000 6-3000 6-3000 6-3000
habka qaboojinta Qaboojinta Hydrojet Qaboojinta Hydrojet Qaboojinta Hydrojet Qaboojinta Hydrojet
danab Input 3P 380V 50Hz 3P 380V 50Hz 3P 380V 50Hz 3P 380V 50Hz
awood motor 1.1KW 1.1KW 1.2KW 1.5KW
Aragti LxWxH (mm) 1600 x800 x2000 1600 x800 x2400 1900 x900 x2900 1900 x900 x3200
miisaanka （Kg） 800 900 1100 1200
Dhererka kululaynta ugu badan （mm） 2000 2500 3000 4000
Dhex-dhexaad kululaynta （mm） 600 600 600 600
Dhererka haynta ugu badan （mm） 2000 2500 3000 4000
Miisaanka ugu badan ee shaqada 'Kg' 800 1000 1200 1500
xawaaraha wareega wareegga shaqada （r / min） 0-300 0-300 0-300 0-300
awood motor 2KW 2.2KW 2.5KW 3KW
Aragti LxWxH (mm) 1900 x900 x2400 1900 x900 x2900 1900 x900 x3400 1900 x900 x4300
miisaanka （Kg） 1200 1300 1400 1500
Qalabka mashiinka mashiinka qallafsanaanta / deminta:
Nidaamka 1.CNC: Mashiinka qallafsanaanta mashiinka mashiinka sare ee CNC wuxuu ururin karaa oo kaydin karaa barnaamijyo badan oo habka daminta iyadoo la raacayo shuruudaha shaqooyinka kala duwan.
2.HMI: Nooca barnaamijyada iyo mashiinka iskuxirka mashiinka aadanaha oo ku baxa Ingiriis iyo Shiine.
3.Control hagaaji: waxay xakamayn kartaa awooda kuleylka si ay u bilawdo, u joojiso, qaybaha kuleylka iyo qaboojinta waqtiga, xawaaraha wareega iyo xawaaraha dhaqdhaqaaqa.
4.Lathe: korsado qaab-dhismeed welded leh shaqooyin wanaagsan oo miridhku-caddeeyo.
Qaybaha hagaajinta 5.Top: korsado sixitaanka korantada, si loo xaqiijiyo isku xirnaanta qaybta shaqada dhererkeeda kala duwan.
Nidaamka miiska 6.Work: korsado kubbadda iyo mootada adeegga si loo wado, nalka wadista, hagitaanka sare ee saxda ah iyo meeleynta saxda ah.
Nidaamka wareegga usheeda dhexe 7.Main: korsado isdabajoogga isdabamarinta jaangooyooyinka si loo ogaado qaybaha xawaaraha wareegga si joogto ah loo hagaajiyo
8.Qeybta koontaroolka korantada: qalabka mashiinka wuxuu leeyahay awood difaac-furid, wuxuu leeyahay badbaado sare iyo kalsooni.
9.Frame: oo lagu sameeyay taarikada birta adag, leh daaqad iyo albaabo is dabajoog ah, ka hortag biyo ku buufin, fududahay in qaybo la rakibo lana kormeero adkaynta induction geedi socodka.
Induction Indha-adayga Adkaanta Qalabka